Sandpebblestours နှင့်အတူ Raja ပွဲတော် Odisha - Call + 91-993-702-7574
Raja ပွဲတော် Odisha
Odisha ရန်သင့်ခရီးစဉ်စီစဉ်? ထို့နောက် Raja ပွဲတော် Odisha ၎င်း၏စစ်မှန်သောအရောင်များအတွက်ပြည်နယ်ကြည့်ရှုရန်စံပြအခါသမယမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။
"Raja" - ကအသံကြောင့်အတိအကျတူညီင်; သင့်ရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးနှောင့်ရှက်မနေပါနဲ့ !!! အဆိုပါပွဲတော်အခါသမယလုပ်ဖို့အရာတစ်ဦး smorgasbord အတွက်ရရှိလာတဲ့, ကခုန်, သီချင်းဆိုခြင်း, အစားအစာအမျိုးပေါင်း, & အစဉ်အလာတစ်ခုနူးညံ့သိမ်မွေ့သောချိန်ခွင်လျှာပေးထားပါတယ်။ ဆက်ဆက်ကြောင့်အခြားအဆင့်အထိခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အားလပ်ရက်အတွေ့အကြုံကိုပါပဲ။
ကိတ်မုန့်ပေါ် icing, သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည် N ကို Travels ၏ပွဲတော်အတွက်ခဲဖွယ်စားဖွယ်ထည့်သွင်းဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် packages များကမ်းလှမ်း "Raja"။ နှင့်အညီ, သင်သည်အဘယ်သို့, သင့်ချစ်ရသူနှင့်အတူအခမ်းအနားအသက်ရှင်ရန်ပြည်နယ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကိုမှမရခရီးသွားလာခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့လမ်းဖြစ်နိုင်မည်နည်း
မြင့်မားကဒီအချိန်ပွဲလမ်းသဘင်ဝိညာဉျကိုစောင့်ရှောက်ရန် သဲကျောက်စရစ်လှည့်လည် N ကို Travels အထိကမ်းလှမ်း 20% လျှော့စျေး အားလုံးလုပ်ထက်ပို 60 branded ဇိမ်ခံမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူပျော်မွေ့နေထိုင်နှင့်လမ်းခရီးဘို့ကြိုတင်စာရင်းသွင်း, ပေါ်မှာ။ သင်တစ်ဦး Sedan, SUV ကား, ဒါမှမဟုတ် High-end ဇိမ်ခံကားလိုအပ်ပါတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, သင်ရုံတစ်ကလစ်မှာသင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုစီးကိုရှာဖွေသေချာပါသည်။
အတူ Odisha ရန်သင့်ခရီးစဉ်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန် သဲကျောက်စရစ် Tours မှ & သင်တစ်သက်တာအဘို့အမြတ်နိုးပါတယ်အမှတ်တရများ၏နေအိမ်စည်းစိမ်ကိုယူပါ။ Call: + 91-993.702.7574.